Echiche Echiche: Itinye Rose, Bud, Ihe Ogwu Azụmaahịa | Martech Zone
Izu a abụwo ihe na-akpali akpali dịka mụ na ụfọdụ ndị na-ahụ maka ụlọ ọrụ sitere na Salesforce na ụlọ ọrụ ọzọ na-arụ ọrụ iji hụ otu m ga - esi melite usoro izu maka ndị ahịa ha. Nnukwu ọdịiche dị na ụlọ ọrụ anyị ugbu a bụ na ụlọ ọrụ na-enwekarị mmefu ego na akụrụngwa, oge ụfọdụ nwere ngwa ọrụ, mana anaghị enwekarị usoro iji kpochapụ atụmatụ ogbugbu kwesịrị ekwesị.
Otu ngwa na ha na-n'okporo ụzọ fọrọ nke nta ka ọ bụla ahịa bụ a imewe echiche ọrụ akpọ "bilie, nwa osisi, ogwu". Ihe dị mfe nke mmega ahụ na isiokwu ndị akọwapụtara na ya na-eme ka ọ bụrụ usoro dị ike maka ịkọwapụta ọdịiche na mbọ ahịa gị.
Red, acha anụnụ anụnụ, na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ nnyapade
Ọtụtụ mgbidi ma ọ bụ ogwe ọcha
Onye nhazi maka idebe ihe na uzo
Ndị isi mmadụ abụọ ruru 2 ghọtara usoro ahụ
Ihe Nlereanya maka Ngwa
Ikekwe ị ga-emejuputa teknụzụ ahịa ọhụụ iji mepụta njem ndị na-akpaghị aka maka ndị ahịa gị. Ihe oru ngo a nwere ike ibata iti mkpu n'ihi na ị maghị ebe ị ga-amalite atụmatụ gị. Nke a bụ ebe bilie, nwa osisi, ogwu nwere ike ịbịaru aka.
Rose - Gịnị Na-arụ Ọrụ?
Bido site na idetu ihe na-aru oru na mmejuputa ya. Ikekwe ọzụzụ a adịla mma ma ọ bụ ịdị mfe nke iji ikpo okwu. Ikekwe ị nwere nnukwu akụ na otu gị ma ọ bụ site na ndị ọzọ iji nyere aka. O nwere ike ịbụ ihe ọ bụla… naanị dee ihe na-arụ ọrụ.
Bud - Gịnị bụ Ohere Ohere?
Ka ị na-amalite ịwụfu site na ndị gị, usoro, na ikpo okwu, ụfọdụ ohere ga-ebili n'elu. Ikekwe nyiwe ahụ na-enye mmekọrịta mmadụ na ibe, mgbasa ozi, ma ọ bụ ike izi ozi ederede nke nwere ike inyere gị aka ịkwado atụmanya gị ọtụtụ ọwa. Ikekwe enwere ụfọdụ njikọta iji mejupụta ọgụgụ isi n'ọdịnihu. O nwere ike ịbụ ihe ọ bụla!
Ogwu - Kedu Ihe Emebiri?
Ka ị na-enyocha ọrụ gị, ị nwere ike ịchọpụta ihe ndị na-efu, ndakpọ olileanya, ma ọ bụ ndị na-ada ada. Ikekwe ọ bụ usoro iheomume, ma ọ bụ na ịnweghị ezigbo data iji mee mkpebi ụfọdụ.
Ọ bụrụ n ’iji ezigbo nkeji iri atọ ruo iri anọ na ise nyere ndị otu gị aka ka ha biputere akwụkwọ ma chee echiche banyere rose, akụrụngwa, ma ọ bụ ogwu ọ bụla, enwere ike ịhapụ gị nchịkọta nke nnyapade ederede ebe niile. Site na itinye echiche gị niile na ndetu nwere agba ma hazie ha, ị ga-ahụ ụfọdụ isiokwu ga-apụta na ị hụbeghị mbụ.
Nzọụkwụ ọzọ bụ ụyọkọ ndetu, a na-akpọ usoro a mmekọrita nkewa. Ahu nagide categorization ịkwaga ndetu na hazie ha si rose, nwa osisi, ogwu ka n'ezie Filiks. N'ihe banyere mgbalị ịzụ ahịa gị, ị nwere ike chọọ inwe ọtụtụ ogidi:
nchọpụta - nyocha na data di mkpa iji hazie ahia ahia.
Strategy - mgbalị ahịa.
mmejuputa iwu- - akụrụngwa na akụrụngwa dị mkpa iji wuo atụmatụ ahịa.
egbu - akụrụngwa, ebumnuche, na mmụba nke ụzọ ahụ.
Optimization - ụzọ iji melite ụzọ na oge ma ọ bụ oge ọzọ.
Ka ị na-ebugharị ihe ndetu gị na edemede ndị a, ị ga-ahụ ụfọdụ nnukwu isiokwu bidoro mewe. Ikekwe ị ga-ahụdị otu na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ọzọ… na-enyere gị aka ịhụ ebe mgbochi ahụ dị ka ị wee nwee ike ikpebi otu ị ga - esi gafere ya nke ọma.
Nke a bụ naanị mmega ahụ dị mfe ejiri tinye n'ọrụ n'echiche. Echiche echiche bụ usoro sara mbara nke a na-etinyekarị na njirimara ahụmịhe onye ọrụ, mana ọ na-agbanwe n'ime inyere ndị azụmaahịa aka idozi nsogbu ka ukwuu.
E nwere usoro 5 nke imewe echiche - ikwusi ike, kọwaa, ideate, nnwale, na nnwale. Myirịta dị n'etiti ndị ahụ na njem agile ahịa M mepụtara abụghị ihe mberede!
Aga m agba gị ume ka ị gaa nkuzi, lelee vidiyo, ma ọ bụ ọbụlagodi zuta akwukwo na Design Design, ọ na-enwogha otu ụzọ azụmaahịa si arụ ọrụ. Ọ bụrụ na ị nwere ndụmọdụ ọ bụla, biko hapụ ha na nkwupụta!
Tags: Arụ ọrụbudechiche echicheechichemarketingmarketing atụmatụbiliebilie ogwu nwaatụmatụogwu